China K akateedzana kudzora marasha feeder Kugadzira uye Fekitori | Chengxin Vibration Midziyo
K-mhando inodzosera marasha feeder inoshandisa crank yekubatanidza tsvimbo nzira yekukwevera pasi ndiro yemadhigirii mashanu kudzika kuti iite mitsara inodzosera kufamba pane roller, kuitira kuburitsa zvakafanana marasha kana zvimwe zvakasununguka granular uye hupfu zvinhu zvine diki kukuya pfuma uye diki viscosity kubva midziyo yekudyisa kumidziyo inogamuchira.
K-mhando inodzosera marasha feeder inoshandisa crank yekubatanidza tsvimbo nzira yekukwevera pasi ndiro yemadhigirii mashanu kudzika kuti iite mitsara inodzosera kufamba pane roller, kuitira kuburitsa zvakafanana marasha kana zvimwe zvakasununguka granular uye hupfu zvinhu zvine diki kukuya pfuma uye diki viscosity kubva midziyo yekudyisa kumidziyo inogamuchira. K-mhando inodzosera feeder yakakodzera kutakura zvinhu zvakawandisa mumigodhi, migodhi, marasha ekugadzirira zvirimwa, zviteshi zvekuchinjisa, mashala ekubata mashopu, chiteshi chengarava zvinhu zviteshi, nezvimwewo zvinogona kuendesa zvinhu zvakawandisa kuenda kubhandi rekutakura kana zvimwe zvekuongorora zvekuchengetera zvishandiso kuburikidza nesilo kana zvakananga. Ziva yunifomu kudyisa ore, jecha marasha, zviyo uye zvimwe hombe zvinhu
Midziyo iyi inogona kudyisa marasha zvakaenzana kuburikidza nemarasha bunker kuenda kune inoendesa kana imwe michina yekuongorora, inoenderana neyangu uye marasha ekugadzirira chirimwa.
1. Maumbirwo: iyo yemarasha feeder inoumbwa nefanera, chinodzora, yakajairika mota, kufambisa chikuva, hutachiwana mashandiro, pasi ndiro (yemarasha yekudyara ndiro), yemarasha yekudyisa muviri, roller uye gedhi.
2. Musimboti: kuburikidza neyekuderedza uye crank yekubatanidza tsvimbo mashini, mota inotyaira yepazasi ndiro kuti iite mitsara inodzosera kufamba pane iyo roller, kuti iite zvakafanana kuburitsa zvinhu kune inoendesa kana imwe yekuongorora michina.
Kune mhando mbiri dzemarasha feeder chimiro: ine inogadzirisa gedhi uye isina kudzora gedhi.
Kubudirira negedhi rinodzora kunogona kudzorwa negedhi, uye chibereko chakanyorwa mutafura iri pamusoro ndiko kugadzirwa kana kuchinjirwa kune yakanyanya nzvimbo (yakaenzana neiyo isina kutonga gedhi).
Kuisirwa uye kushandiswa kweK-mhando inodzosera marasha feeder (feeder)
1. Kudzosera feeder yemarasha inogadziriswa pasi pekuvhurwa kwebhini rekuchengetera. Usati wagadzwa, zvinodikanwa kuti utarise chinzvimbo chakatwasuka, sunga furemu uye bhaini kuvhura nemabhaudhi, wozoisa chikuva chekutepfenyura munzvimbo chaiyo, sunga iyo H-furemu nefuremu uye chikuva chekutepfenyura, simbisa uye gadza chinodzora nemota, gadzirisa zvakanaka, uye sunga nemabhaudhi
2. Mushure mekuiswazve kwekudzorera marasha feeder, hapana-mutoro bvunzo yekumhanya inodiwa. Panguva yekushanda, tarisa kana zvikamu zvese zvichishanda zvakajairika, uye iyo yakanyanya tembiricha kumuka kwekupumbuka kubereka hakuzove kwakakwirira kupfuura 60 ℃.
3. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge taita, taura dhimoni repini pachikamu chakatsemurwa, sunungura nzungu, tenderedza chinzvimbo "1,2,3,4 ″ cheganda reganda kuti usarudze chinzvimbo chakamisikidzwa. pini mugodhi, batanidza crank uye crank goko, sungisa pini mugodhi uye nzungu, uye wozotanga injini mushure mekugadzirisa.
Kugadziriswa kwezuva nezuva uye kugadziriswa kweK-mhando inodzosera marasha feeder (kudzosera feeder):
1. Pamberi pekushanda kweanopa feeder, panofanirwa kuve nemarasha akakwana akasvinwa mubunker kunzvenga kukanganisa kwakadzika pasi (marasha ekudyira ndiro) kana uchinge uchinge uchitakura marasha mubunker.
2. Mushure mekuenderera kwebasa mwedzi wega wega, tarisa kana zvikamu zvemuchina zvakasununguka uye zvimwe zvisina kujairika zviitiko. Kana paine zvisina kujairika zviitiko, zvigadzirise nekukasira.
3. Hwendefa repazasi rembangara rekudzosera feeder yemarasha rakanangana nemarasha rinofanirwa kugadziriswa kana kutsiviwa kana ukobvu hwayo hwodarika hafu yehuswa hwepakutanga.
Kana zvikamu zvinodzosera zvikasashanda zvakajairika kwemwedzi mitanhatu, zvinofanirwa kuchinjwa nekukasira.
Kugadziriswa kwezvikamu zvikuru zvekudzosera marasha feeder:
a. Reducer: tarisa mwedzi yega yega mitanhatu, uye suka inotenderera inobereka uye bhokisi kana shandura mafuta ekuzora.
b. Mota: zvinoenderana nezvinodiwa zvekuchengetedza mota.
Pashure: HGM yakateedzana yakamisikidzwa vibration marasha feeder
Zvadaro: ZG vibrating feeder